Arsenal, Chelsea, Manchester City & Guud ahaan kulammada Maanta & Caawa laga ciyaari doono siddeed dhammaadka FA Cup-ka – Gool FM
Arsenal, Chelsea, Manchester City & Guud ahaan kulammada Maanta & Caawa laga ciyaari doono siddeed dhammaadka FA Cup-ka
Haaruun June 28, 2020
(England) 28 Juun 2020. Kulamo ka tirsan siddeed dhammaadka FA Cup-ka ayaa maanta iyo caawa la ciyaarayaa, iyadoo Kooxaha waa weyn ee Arsenal, Chelsea iyo Manchester City ay dhammaantood wada ciyaari doonaan.
Koox waliba waxa ay doonaysaa inay guul gaarto oo ay iska xaadiriso afar dhammaadka FA Cup-ka oo ay xalay gaartay Manchester United.
Kooxda ugu hanashada badan FA Cup-ka Arsenal taasoo qaaday 13 jeer ayaa galabta booqanaysa Sheffield United, guul ay gaarto Gunners ayaana ka dhigan inay markeedii 30-aad taariikhdeeda iska xaadirin doonto afar dhammaadka ama Semi-finalka FA Cup-ka.
Chelsea ayaa dhanka kale u safreysa Leicester City, iyadoo doonaysa inay guul ka soo gaarto maankana ku haysa in haddii uu kulankaasi barbaro ku dhammaado aan la soo aadi doonin galbeedka magaalada London balse 30’daqiiqo oo dheeri ah lagu dari doono kaddibna haddii lagu kala bixi waayo rigooreyaal la isla aadi doono.
Dhinaca kale Manchester City ayaa booqanaysa Newcastle United, iyadoo doonaysa inay difaacato koobkan, isla markaana iska xaadiriso afar dhammaadka tartankan.
Manchester United ayaa xalay iska xaadirisay afar dhammaadka FA Cup-ka kaddib markii ay 2-1 uga adkaatay Norwich waqtigii dheeriga ahaa ee lagu kordhiyey ciyaarta, waxaana ay sugi doontaa saddexda kooxood ee maanta iyo caawa ka soo baxa lixdaan kooxood.
3:00 Galabnimo Sheffield United vs Arsenal
6:00 Maqribnimo Leicester City vs Chelsea
8:30 Habeennimo Newcastle United vs Manchester City
Man United oo u gudubtay afar dhamaadka tartanka FA Cup kaddib markii ay guul ka gaartay kooxda Norwich City… +SAWIRRO
Horudhac: Espanyol vs Real Madrid… (Los Blancos oo caawa u baahan inaan laga adkaan si ay hoggaanka horyaalka ugala wareegto Blaugrana, marka ay u safreyso Magaalada Barcelona)